Tag: hits waddaa | Martech Zone
Tag: hits ayaa socda
Isniin, Janaayo 23, 2012 Isniin, Janaayo 23, 2012 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor saaxiibkeygii wanaagsanaa ee Pat Coyle, oo iska leh wakaaladda suuq-geynta suuq-geynta, ayaa igu dhiirrigeliyey inaan akhriyo Moneyball. Sabab ama sabab kale, weligay buugga kuma saarin liistadayda akhriska. Dhowr usbuuc ka hor ayaan daawaday filimka isla markiibana waan dalbaday buugga si aan ugu sii dhexgalo sheekada xitaa si ka sii qoto dheer. Anigu ma ihi nin isboorti… sidoo kale ma noqon kartid. Marar dhif ah ayaan ka helaa kuleej ama xirfadle kasta